एनआइसी एशियाको 'सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स बचत खाता' : यस्ता छन् फाइदा र सुविधा
एनआइसी एशियाको ‘सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स बचत खाता’ : यस्ता छन् फाइदा र सुविधा
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई लक्षित गर्दै एनआइसी एशिया बैंकले बिशेष अफर ल्याएको छ । बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई विशेष फाइदा दिने गरी बैंकले सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स बचत खाता ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बचतको तुलनामा रेमिट्यान्स बचतमा अतिरिक्त १ प्रतिशत ब्याजदर दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अझ राज्यले पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरु बनाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले ल्याएको योजनाले धेरै नै फाइदा पुग्ने छ । एन आइ सी एशियाको रेमिट्यान्स बचतमा बैंकहरुका धेरै आकर्षक स्किमहरु छन् । त्यसैले तपाईहरुका लागि थप फाइदाजनक हुनेछ ।
न्यूनतम मौज्दात कति चाहिन्छ ?
एनआइसी एशिया बैंकले अन्य सर्वश्रेष्ठ बचत खाता योजनाहरु जस्तैः रेमिटेन्सलाई पनि ३ भेरियण्ट बनाएको छ । सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स खाता अन्तर्गतको एनआइसी एशिया गुडविल एम्बेसडर श्रेणीमा खाता खोल्न २० हजार रुपैयाँ, द प्राइड अफ एनआइसी एशियामा १० हजार रुपैयाँ र द पार्टनर अफ एनआइसी एशियामा खाता खोल्दा न्यूनतम मौज्दात ५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मौज्दात भए पुग्छ । यो खातामा प्राप्त हुने ब्याजदर भने बैंकले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने छ । हाल तीनवटै श्रेणीको लागि वार्षिक ९.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
सर्वश्रेष्ठ रेमिटेन्स बचत खाता खोल्नेहरुका लागि बैंकले आकर्षक बीमा फाइदाहरु उपलब्ध हुने छ । बैंकका अनुसार औषधी उपचार बीमा, घातक रोग बीमा र दुर्घटना बीमा गरी तीन किसिमका फाइदाहरु प्रदान हुनेछन् । दुर्घटना बीमा र घातक रोग बीमातर्फ अन्तर्गत गुडविल एम्बेसडर श्रेणीका लागि ४० लाख रुपैयाँ, द प्राइड अफ एन आई सी एशियाका लागि २० लाख रुपैयाँ र द पार्टनर अफ एन आइसी एशियाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा फाइदा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी औषधी उपचार बीमातर्फ भने गुडविल एम्बेसडर श्रेणीका लागि ओपीडीका लागि ८० हजार र अस्पताल भर्नाका लागि ३ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी ४ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै द प्राइड अफ एनआइसी एशियाका लागि ओपिडी ४० हजार र अस्पताल भर्ना १ लाख ६० हजार गरी २ लाख रुपैयाँसम्म र द पार्टनर अफ एनआइसी एशियाका लागि ओपिडी २० हजार र अस्पताल भर्ना ८० हजार गरी १ लाख रुपैयाँसम्म बीमा सुबिधा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।
अझ रोचक कुरा त गुडविल एम्बेसडर श्रेणीमा रेमिटेन्स खाता खोल्नेले खातावालासँगै आफूले रोजेको अन्य तीन जनासम्मका लागि यस्तो फाइदा पाउनेछन् । द प्राइड अफ एनआइसी एशियामा पनि खातावाला र खातावालाले तोकेको अर्को एक जानले समेत यस्तो फाइदा पाउनेछन् । यो बीमा फाइदा ५ वर्षका लागि हुने छ । तर, नियमनकारी निकाय बीमा समितिको नीति निर्देशन बमोजिम परिवर्तन वा रद्द हुन सक्नेछ ।
सेयर किनबेच गर्दा पनि सुविधा
पछिल्लो समय शेयर बजारमा निकै राम्रो आकर्षण छ । ५० लाखभन्दा धेरै डिम्याट प्रयोगकर्ता छन् । सेयर बजारमा बढ्दो आकर्षणलाई ध्यान दिदै एनआइसी एशिया बैंकले रेमिटेन्स बचत खाता खोल्नेहरुका लागि विशेष फाइदाको अफर गरेको छ ।
सर्बश्रेष्ठ रेमिटेन्स खाताका सबै भेरियण्टहरुमा खाता खोल्नेहरुका लागि एन आई सी एशियाले डिम्याट खाता ५ वर्षका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । जसको कारण तपाईले वार्षिकरुपमा रकम तिरेर डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने तनाव हट्नेछ ।
यतिमात्रै होइन तीनै भेरियण्टका लागि मेरो सेयर शुल्कमा ५ वर्षसम्मै शतप्रतिशत छुट र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने बैंकले जनाएको छ ।
माथि उल्लेखित फाइदाहरु सँगै अन्य धेरै फाइदाहरु समेत छन् । रेमिटेन्स खाता खोल्नेहरुका लागि पूर्वस्वीकृति कर्जामा समेत बैंकले निकै आकर्षक फाइदा दिनेछ । अन्य डिजिटल कारोबारहरुमा लाग्ने शुल्कमा पनि बैंकले धेरै निःशुल्क फाइदा दिने बताइएको छ ।
डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग ५ वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनेछ भने क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क, कनेक्ट आर्यपीएस-आईपीएस, आरटीजीएस, एटीएम कारोबार लगायतमा समेत ५ वर्ष निःशुल्क फाइदा दिने बैंकले जनाएको छ ।
सर्वश्रेष्ठ रेमिट्यान्स बचत खाता कस्ता व्यक्तिले खोल्न पाइन्छ ?
नेपाली नागरिक जो वैदेशिक रोजगारको लागी विदेश जादै गरेका वा हाल विदेशमा भएका वा विदेशमा काम गरि रहेकानेपाली नागरिकका एकाघर परिवारको कुनै पनि सदस्य जसको नाममा रेमिट्यान्स आएको हुन्छ सो व्यक्तिहरुको
नाममा मात्र सर्वश्रेष्ठ रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्न पाउँछन् ।
सर्वश्रेष्ठ रेमिट्यान्स मुद्दती खाता र अरु मुद्दती खातामा के भिन्नता छ ?
सर्वश्रेष्ठ रेमिट्यान्स मुद्दती खाता र अरु मुद्दती खाताको मुख्य भिन्नता भनेको यस योजनामा प्रदान गरिने ब्याजदर हो । यस योजनामा अरु मुद्दती योजनामा भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रदान गरिन्छ ।